WordPress Blog - Page 105 of 110 - Just another WordPress site
အသက် ( ၅၀ ) မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ချင်ရင် အသက် ( ၃၀ ) မှာဒါတွေစပြီး လုပ်ထားသင့်ပါပြီ အသက် ၃၀ တန်းကိုရောက်ပြီ ဆိုရင်တော့ဒီအလုပ်တွေကို တကယ် စလုပ်သင့်ပါပြီ။ အသက် ၅၀ မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ချင်ရင်အသက် ၃၀ မှာဒါတွေစပြီး လုပ်ထားပါအသက် ၅၀ အရွယ်တွေကို ငယ်ငယ် တုန်းက ဘာလုပ်ခဲ့ရင်ကောင်းမှာပဲ လို့တွေးမိသလဲ မေးခဲ့ပါတယ်အဖြေတွေက သိပ်ကို ကောင်းမွန်ပြီးရိုးရှင်း လှပါတယ်။ ကိုယ့်အသက်၃၀တန်းကိုရောက်ပြီဆိုရင် ဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်သင့်ပါပြီ..! ၁. ဆေးလိပ်မသောက်နဲ့။ သောက်မိပြီဆိုရင် ဖြတ်ပစ်ပါ။ ၂. အမြန်စာတွေကို မစားပါနဲ့တော့။ ၃. မိဘ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေနဲ့ ..ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ပါစေ။ ၄. နေရောင်ကာဆေးမပါဘဲ နေပူထဲ မထွက်ပါနဲ့တော့။ ၅. ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ […]
ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထား ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်း လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက် (၁၀) ချက်
ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထား ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်း လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက် (၁၀) ချက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်မြတ်နိုးဖို့ဆိုတာ…သိပ်ကို အရေးကြီးတဲ့အချက် ဖြစ်ပါတယ်။လူပေါင်းစုံရှိတဲ့ လောကကြီးမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလောက် ကိုယ့်ကို ချစ်မယ့်သူ ထပ်ရှိဖို့ဆိုတာ မသေချာပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့အစစအရာရာကို ကိုယ်ကမှ မချစ်ရင် တခြားသူ ချစ်လာဖို့ကို မျှော်လင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါက အဓိပ္ပာယ် မရှိတဲ့ အချက်ပါပဲ။ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားတယ်၊ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်တယ်ဆိုရင်တော့ အခုဖော်ပြမယ့် အချက်တွေက မဖြစ်မနေ လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် (၁) ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ ကျန်းမာရေးမကောင်းရင် ဘာမှ လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ဘာပဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်ချင် ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့က နံပါတ်(၁) မို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်တယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးကောင်းအောင် နေဖို့၊အစားအသောက် ဆင်ခြင်ဖို့၊ကျန်းမာရေးပိုကောင်းစေမယ့် အစားအသောက်တွေကို စားသောက်ဖို့နဲ့ တခြားသော ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေလည်း […]
နွေအပူလျော့စေမည့် ဧပြီမိုး စစ်ကိုင်းတိုင်းအရှေ့ပိုင်း မန္တလေးတိုင်းအရှေ့ပိုင်း မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွေမှာ န့အပူချိန်များတိုးလာမှာဖြစ်လို့ နေခင်းနေ့လည်တွေမှာ အရိမ်အာဝါသအောက်မှာနေကြပါ တနင်္သာရီတိုင်း ၂၀၂၂ မတ်လ ၁၅ရက်နေ့မှ ၁၈ရက်နေ့အတွင်း တနင်္သာရီတိုင်း ကြီးတွင် မိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီး မြိတ်ကျွန်းစု မိုးကြီးနိုင်ပါတယ် အပူလျော့စေမည့် ဧပြီမိုး မြနန္ဒာ နေညိုညိုရစ်ကာသန်းတော့ ၂၀၂၂ ဧပြီလမှာ နတ်မောက် ကျောက်ပန်းတောင်း ဂွေးချို ညောင်ဦး ဆည်ရွာ ပုပ္ပါး စက်ထိမ်း ဝဲလောင် တောင်သာ မြင်းခြံ နွားထိုးကြီး မြစ်သား ကူမဲ ဝမ်းတွင်း ပင်းတလဲ တဲစု သဖန်း မိတ္ထီလာ သာစည် ပျော်ဘွယ် ရမည်းသင်း မလှိုင် ပန်းအိုင် ဆည်တို ရုံးစည်ကြီးပခန်းကြီး ပခန်းငယ် မြစ်ခြေ မြောင် ချောင်းဦး မုံရွာ […]
ကြည်လင်လှပတဲ့ မျက်နှာ အသားအရေလေး ရရှိဖို့ အတွက် ဆန်နဲ့ မျက်နှာပေါင်းတင်နည်း
ကြည်လင်လှပတဲ့ မျက်နှာ အသားအရေလေး ရရှိဖို့ အတွက် ဆန်နဲ့ မျက်နှာပေါင်းတင်နည်း ဆန်ဟာ အဟာရ ဓာတ်ကြွယ်ဝ ရုံသာ မက အလှပ အတွက်လည်း အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ သင်ရဲ့အသားအရေကို စိုပြေကြည် လင်စေ မှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဆန်နဲ့ ပေါင်းတင် နည်းတွေကို မျှဝေပေး သွားပါမယ်။ အခုပေါင်းတင်နည်းတွေဟာ အသားအရေကို ကြည်လင်စေပြီး အဆီပြန်မှု ကင်းဝေးစေ မှာဖြစ်သလို အသားအရေ နူးညံ့စေမှာပါ။ ၁။ ဆန်နဲ့ ရှားစောင်းလက်ပက် ဆန်မှုန့် ရှားစောင်းလက်ပက်အနှစ် ရေ ရှားစောင်းလ က်ပက် အနှစ်ကို ယူလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဆန် စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်းထည့်ပါ။ ရေ နည်းနည်းထည့်ပါ။ ခပ်ပျစ်ပျစ်လေးဖျော်ပြီး မျက်နှာပေါ်မှာ စိမ့်ဝင် သွားအောင် […]
ရှေ့နေကိုယ်တိုင် အတည်ပြု ထုတ်ပြောလာတဲ့ ပိုပိုနဲ့ရဲတိုက် ကျန်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း အမှန်
ရှေ့နေကိုယ်တိုင် အတည်ပြု ထုတ်ပြောလာတဲ့ ပိုပိုနဲ့ရဲတိုက် ကျန်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း အမှန် သရုပ်ဆောင် ရဲတိုက်က လွတ်ငြိမ်းခွင့်ဖြင့် ပြန်လည် လွတ်ချင်သောကြောင့် ကျန်ရှိနေသော ၎င်းအမှုကို အမြန်စစ်ဆေးပေးရန်တရားခွင်အတွင်း တောင်းဆိုကြောင်း အင်းစိန်ထောင်တွင်း သတင်းရင်းမြစ်နဲ့ ရှေ့နေတစ်ဦးက ယနေ့ ပြော ပြ ပါသည် …။ သရုပ်ဆောင် ရဲတိုက်ကို ရန်ကုန် အနောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံး၌ ယမန်နေ့ မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ရုံးထုတ် စစ်ဆေးခဲ့စဉ်၎င်းက တရားသူကြီးထံ ယင်းသို့ လျှောက်လဲ တောင်းဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ “အမှုကို မြန်မြန်စစ်ပေးဖို့ ပြောပါတယ်။ သူများတွေ လွတ်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းလည်း သူထောင်ထဲမှာ ကြားနေမှာပေါ့။အခု မူးယစ်ဆေးပုဒ်မ အတွက် လိုပြ သက်သေ သုံးယောက် ကျန်တာ […]
အသက်(၁၆)နှစ်အရွယ်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်အိမ်တစ်လုံး ဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ မိန်းကလေးငယ်…
အသက်(၁၆)နှစ်အရွယ်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်အိမ်တစ်လုံး ဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ မိန်းကလေးငယ်… လီလီဟာ ထိုင်း နာမည်ကျော် မိန်းကလေးထဲ က တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူမ ဟာ ငယ်ငယ်လေးနဲ့တင် သူမရဲ့ စိတ်ကူးယဉ် အိမ် တစ်လုံးကို ကိုယ်ပိုင် ဝယ် ယူနိုင် ခဲ့ပါ တယ် ။ သူမက အသက် ၁၆ နှစ်သာရှိပြီး ကျွန်တော် တို့ စံနမူနာ ယူထိုက်တဲ့ သူလေးပါ။ မကြာသေးမီက Lily ဟာ သူမရဲ့ အမေနဲ့ သူမ ရဲ့အိမ်ပုံကို Instagram မှာ တင်ခဲ့ ပါတယ်။ ” ကျွန်မ အောင်မြင်ခဲ့ပြီ။ အမေ့ အတွက် အိမ်လေးဝယ်ပေး ရလို့ ကျွန်မ အရမ်းပျော်ခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုလည်း ဂုဏ် […]
နေအိမ်တွင် ထပ်မံပြီး အင်အားအများအပြားနဲ့. မတရားပြန်လည်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့…
နေအိမ်တွင် ထပ်မံပြီး အင်အားအများအပြားနဲ့. မတရားပြန်လည်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့… ပရိသတ်ကြီးရေ ဒါရိုတ်တာ မိုက်တီးကတော့ မဲဆွယ် ကာလတုန်းက NLD အောင်နိုင်ရေး ဇာတ်ကားတွေ ရိုတ်ကူးခဲ့ပြီး ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးမှာပြည်သူတွေနဲ့ အတူ တတ်တတ်ကြွကြွပါဝင် ခဲ့သူ တစ်ဦးပါ။ ဒါရိုက်တာ မိုက်တီးကို မတ်လ၁၂ရက်ညက ရန်ကင်း ဘောက်ထော်က နေအိမ်မှာရှိနေတဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက လာရော က်ဖမ်းဆီး သွားတယ်လို့ သိရ ပါတယ်။ ဒါရိုတ်တာ မိုက်တီးကို ပုဒ်မ ၅၀၅က ထုတ် ထားခြင်းမ ရှိဘဲ မတရား ဖမ်းဆီးခံ တာလည်း ဖြစ် ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ မိသားစုနဲ့ အဆက် အသွယ်ပျက်နေပြီး ဘယ်ကို ပို့ဆောင် ခံထားရ မှန်းလည်းမသိသေး […]